कांग्रेसको महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट नेताको के-के मा चल्यो जुहारी ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
कांग्रेसको महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट नेताको के-के मा चल्यो जुहारी ?
Published Date : २०७८ मंसिर २४, शुक्रबार
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा तीन कम्युनिस्ट नेताबीच जुहारी चलेको छ। अतिथिको रुपमा सहभागी कांग्रेस महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डप पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच जुहारी चलेको हो।
सुरुमा बोल्ने अवसर प्राप्त गरेका नेता नेपालले ओलीलाई संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु कुल्चिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा संकेत राम्रो देखिरहेको छैन। कालो बादल मडारिइरहेको छ। नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यो पछाडि फर्केर जान सक्दैन। अब त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरुन्। त्यसो भए मेची महाकाली जनताको विस्फोट हुनेछन्।’
उनले राजनीति र राज्य सत्तामा विकृति भएको बताउँदै त्यसलाई हटाउनुपर्ने भएकाले टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले भने, ‘राजनीतिमा विकृतिहरु छन्। विकृतिहरुलाई पन्छाउनुपर्छ।’
नेता नेपालले विसं २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी पनि आफूसँग रहेकोसमेत जनाएका छन्। उनले भने, ‘२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले राजनितीलाई तरंगित बनाएको थियो। बीपी र पुष्पलालले जसरी राजनीतिलाई तरंगित गर्नुभयो। परिवर्तनका संवाहक बन्नुभयो। त्यही सोंचका साथ ०६२-०६३ मा सँगसँगै अगाडि बढेका थियौं। त्याग, तपस्याको भावनाले मुलुकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौं। त्यही सोंचले अहिले जनताको जीवन सुधार्ने गरि अघि बढेका छौं।’
नेता नेपालपछि बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीलाई संकेत गर्दै एक्लै हिड्ने अहंकार गर्दा ओरालो यात्रा सुरु भएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले तानाशाहीविरुद्धको लडाइँमा एकता प्रदर्शन गरेका छौं। कहिलेकाहीँ चर्को प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छौं र आवश्यक पर्दा सँगै हुन्छौं। तर, कोहीले यहाँ नयाँ तानाशाह बन्ने जमर्को पनि गरेका छन्। एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्दा ओरालो यात्रा सुरु भएको छ।’
नेता नेपाल र प्रचण्डपछि सम्बोधन गरेका ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो पुरानो मित्र भनेर सम्बोधन गरेका थिए। उनले कांग्रेस र एमाले आन्दोलन र परिवर्तनको इतिहास बोकेको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनमा शुभकामना दिइरहँदा कांग्रेस अझ उजिल्याउने गरी प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले नेता नेपाल र प्रचण्डलाई एकमुष्ठरुपमा लक्षित गर्दै भने, ‘थोरै बोल्नुछ। म राजनीतिक कुराहरु गर्न मञ्च जति पनि पाउँछु।’ नेता नेपाललाई लक्षित गर्दै भने, ‘भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला साथीहरूलाई। भर्खरको बाच्छो हिड्न जान्दैन, बढी कुद्छ।’
प्रचण्ड र नेपालको पार्टीलाई उनले साना दलको संज्ञासमेत दिएका छन्। उनले थपे, ‘साना दलहरूलाई कांग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला? हामी कांग्रेसको साथमा छौं। एमाले एक्लै हिड्ने रहर गर्दैन।’